Brookings Harbor ayaa Iibsata Dredge Cusub, Daraasad Kiis Oo Lagu Maamulayo Khiyaanada
New Ellicott Brand® Dredge ee Port of Brookings Harbor ee Oregon
Dekadda Brookings Harbor waa shirkad deked cusub oo ay soo iibsatay gobolka Oregon si ay ugu adeegto dekedaha xeebta koonfureed laga bilaabo Reedsport illaa Brookings.
Maamulayaasha dekada Brookings ayaa horkacayay dadaalka lagu doonayo in lagu iibsado dooxada waxayna gobolka dooratay dekada si ay u kormeeraan howlaheeda xeebaha, ayuu yiri maareeyaha dekada Ted Fitzgerald.
Dredge, oo ah nooca loo yaqaan 'Ellicott® brand' 360 Swinging Dragon® Dredge ', ayaa ku yaal magaalada Bandon toddobaadkan, iyada oo dekedda ka qodaya 40,000 yaardi oo jiibil jireed Qoditaanka cusub ayaa loo isticmaali doonaa in lagu soo qaado qashinka sida dhoobada, dhagaxaanta, iyo xuuraanka lagu ururiyo dekedda, waana qalab inta badan ku adkeynaya in doomaha ay maraan tahriibayaasha doonta.
Qashinka burburka ee laga soo aruuriyay dekedaha cusub ee dekedda Brookings waxaa lagu keydin doonaa goobta EPA oo ku taal meel u jirta xadka 2 mayl xeebta.
Fitzgerald ayaa yiri: "Gobolka Oregon wuxuu u baxay dalab wuxuuna iibsaday qulqul" "Isbahaysiga Dekadaha Koofurta Coast, oo ay ku jiraan dhammaan dekedaha laga soo qaado Reedsport illaa Brookings, waxay bilaabeen soojeedinta fikradda ah inay u weecato dhinaca Xeebta Oregon."
Shaqaalaha dekada Brookings waxay heleen tababaro, ilaa waqtigaas, Brookings wuxuu noqon doonaa howl wadeenka kaliya. Ugu dambeyntiina, Fitzgerald wuxuu yiri, Dekadda Coos Bay sidoo kale waxay ku tababari doontaa shaqaalaha dredge sidoo kale.
“Inta badan dekedaha kale ma leh awood shaqaale,” ayuu yiri Fitzgerald, “waxaana horay u soo aragnay xoogaa khibrad ah.”
Fitzgerald wuxuu intaas ku daray in sida ku xusan Ciiddanka Qalabka Injineerada, dekedaha loo oggol yahay inay qulqulaan laga bilaabo Oktoobar ilaa Febraayo. Caadi ahaan, ayuu yidhi, xilligaani waa xilli gaabis ah oo dekedaha madaddaalo.
Fitzgerald ayaa tiri: "Fikradda ayaa ah inaan qaadan karno qaar ka mid ah shaqaalaheena oo aan ku tababari karno dredge, inta lagu gudajiro waqti aan caadiyan dadka iska fogeyn karno," ayay tiri Fitzgerald.
Fitzgerald wuxuu intaa ku daray in markii qulqulka biyaha aan la adeegsan, uu rajeynayo inuu ka saaro biyaha si uu u keydiyo, gaar ahaan goob u dhow shaqadiisa xigta. Faahfaahinta halka qulqulaha lagu kaydin doono, ayuu yidhi, wali waxay ku jiraan shaqooyinka.
Ku Bilaab Mashruuca Kala Bixinta Dekabadaada Ellicott